Siyakwamukela HD Medical
HD Medical yasungulwa on 2000, kuyinto zobuchwepheshe ezintsha ibhizinisi ubani onguchwepheshe ucwaningo & ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, yokuthengisa emva-sales service ngoba imaging wezokwelapha imikhiqizo imishini. HD Medical isidlulile izitifiketi ISO ngamazwe 9001 ISO 13485 yokuphathwa kwamazinga, has 20 izinhlobo empahla kwesokudla izitifiketi patent.
Imikhiqizo yethu zihlukaniswe Medical DR uchungechunge futhi Animal DR chungechunge. I yezokwelapha DR uchungechunge zibandakanya Fixed isitayela DR chungechunge, Ucingo DR chungechunge, i-Radiography embhedeni flat DR chungechunge, ephathekayo DR chungechunge, Dynamic embhedeni flat DR chungechunge, Physical luhlolo ibhasi nokunye. Animal-DR uchungechunge zihlanganisa ekupheleni High Pet DR, Simple futhi kulula Pet DR, DR-update service, Pet X ray imishini, Veterinary umbala ultrasound, Veterinary MRI, Veterinary ukuhlinzwa embhedeni uchungechunge nokuvikelwa iphrojekthi njll Siphinde ukukhiqiza kokubili izinhlobo DR Mechanics ingxenye ukuze DR.
embhedeni Flat DR digital X ray Radiography ...
Kungani kufanele ukhethe HD yethu Medical?
R Special & D Ithimba kuphela yezokwelapha imishini Imaging, DR, CT, i-MRI, ultrasound.
Kusukela ngonyaka ka-2000 ukuba bagxile ukwakhiwa nokugcinwa Medical imishini Imaging.
izitifiketi Kakade ephethwe of CFDA / ISO9001 / ISO13485, isitifiketi CE isicelo.
Namandla UKUKHIQIZA umthamo futhi esiqinile ukuphathwa kohlelo ukuqinisekisa ukulethwa okusheshayo futhi izinze.
Ephathekayo vet isilwane analog isilwane X ray sy ...
KPET DR3500 Veterinary isilwane isilwane Radi digital ...
KPET DR5500 Veterinary isilwane isilwane umsakazo digital ...
KPET DR6000 Vet isilwane isilwane esimweni digital ...